Trano Voazara: Etiopiana Mpihazakazaka Nosarahan’ny Politika, Miatrika ny Hazakazaka Lavitr’ezaka Any Londra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2017 14:51 GMT
Mety hiaritra tokim-pankatoavana mifanohitra ireo Etiopiana amin'ny Alahady satria hihaona amin'ny andiany faha 36 amin'ny hazakazaka lavitr'ezaka any Londra eny an-dàlan'i Londra ireo Etiopiana roa kintan'ny hazakazaka, Feyisa Lelisa sy Kenenisa Bekele.
Samy avy amin'ny Oromo, vondronà foko lehibe indrindra any Etiopia, i Feyisa sy Kekenisa. Fa ny mampizara azy ireo dia ny politika; Feyisa dia atleta mpanohitra izay miaina an-tsesitany any Arizona, raha nandà ny hanakiana ny fitondrana Etiopiana kosa i Kenenisa, na eo aza ny fanenjehana mitohy ireo olom-pirenena nandova ny Oromo.
Tany amin'ny lalao Olaimpika fanao amin'ny Andri mafàna tao Rio lasa teo, nanao sesitany politika ny tenany i Feyisa Lelisa ho firaisankina miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Etiopia tamin'ny alalan'ny fanehoana ny mariky ny hetsi-panoheran'izy ireo taorian'ny nanitsahany ny tsipika fahatongavana milaza ny fahazoany medaly volafotsy.
Telo herinandro taty aorian'ny hetsi-panoheran'i Feyisa, nitsikera ny fihetsik'i Feyisa i Kenenisa Bekele ary nanao antso hanasarahana ny fanatanjahantena amin'ny politika.
Kekenisa, 34 taona, no atleta Etiopiana nahazo fandresena betsaka indrindra hatramin'izay, mitàna ny zavabita tsara indrindra erantany maromaro ary koa medaly volamena efatra. Tamin'ny faran'ny asany mamiratra teny an-kianja, nanomboka nanao ny hazakazaka lavitr'ezaka izy. Tamin'ny volana Septambra lasa teo, nandresy tamin'ny hazakazaka lavitr'ezaka tao Berlin i Bekele tamin'ny fe-potoana 2:03:03 — ny hazakazaka lavitr'ezaka faharoa haingana indrindra hatrizay.
Feyisa, 27 taona, dia namiratra teo amin'ny sehatry ny hazakazaka lavitr'ezaka tamin'ny 2008. Nanomboka teo izy no nisitraka fotoam-pahombiazana tamin'ny hazakazaka lavitr'ezaka, nahazo fandresena tao Dublin, Xiamen ary Tokyo. Nidera ny herimpon'i Kenenisa amin'ny maha-tanora azy i Feyisa, nefa nandà tsy hiala amin'ny foto-keviny ara-politika.
Tao aminà tafatafa niarahana tamin'ny BBC Afrika, nilaza i Feyisa fa mbola hanohy ny hetsi-panoherany ny governemanta any amin'ny hazakazaka lavitr'ezaka any Londra ary nilaza fa “mandriaka ny rà” any Etiopia.
Nolazain'ny mpitondra tenin'ny masoivohon'i Londra any Etiopia ho “angano” ny fanehoankevitr'i Feyisa.
Korontana any Oromia
Tamin'ireo andianà fitroarana tao Oromia tamin'ny Aprily 2014 no nanombohan'ilay fihetsika malaza maneho fanoherana amin'ny alalan'ny tànana mifanindry izay nampiasain'i Feyisa tany Rio — Oromia izay firenena niavian'i Feyisa sy Kenenisa.
Ny hetsika izay nipoitra taorian'ireo drafitry ny governemanta hanitatra ny sisintanin'ny renivohitra Etiopiana, Addis Abeba, ho any amin'ireo tanàna sy vohitra manodidina an'i Oromia, dia niitatra nankany amin'ireo faritra hafa ao Etiopia, satria nitambatra taorian'ilay alahelo midadasika be manohitra ny governemanta ireo mpandray anjara.
Hatramin'ny nampanginan'ny governemanta ireo hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny fanambaràna ny firenena ho latsaka an-katerena, ilay famantarana firaisankina nataon'i Feyisa tao amin'ny Lalao Olaimpika ho an'ireo vahoaka Oromo natao an-jorom-bala dia nanome tosika be tamin'ilay hetsika satria nihetsika hanasongadina ilay politika famoretana any Etiopia ny haino aman-jery iraisam-pirenena.
Nanomboka teo, hita tao amin'ny parlemanta Eoropeana niaraka tamin'ireo Etiopiana mpitarika ny mpanohitra izy mba hijoro vavolombelona momba ny toedraharahan'ny zon'olombelona any Etiopia. Nangataka tamin'ny governemanta Amerikana izy, izay mpiara-miasa matanjaka amin'ny governemanta Etiopiana, mba handinika ny fifandraisany amin'i Addis Abeba. Ary tamin'ireo fifaninanana maro nidirany hatrany Rio dia naveriny foana ilay fihetsika maneho fanoherana .
Na izany aza rehefa nihaona tamin'i Feyisa i Kenenisa ny Alahady, nisy zavatra hafa tsy maintsyarovana mihoatra lavitra noho ny voninahitra ara-panatanjahantena.
Ao amin'ny haino aman-jery sosialy, mizara ny amin'izay ho tohanany ry zareo Etiopiana. Nefa maro amin'ireo mpikatroka monina any am-pielezana no mametraka mazava ny fahitany ilay andrarezina Kenenisa ho toy ny mpiaro fitondrana.
Nofaranan'i Birhanu Lenjiso:
Mbola hanohy hamorona #Feyisas i #Ethiopia mandra-pijanony amin'ny famoronana #Keninsas ho fitaovana fampanarahan-dalàna amin'ny famoretany.